नि: शुल्क Vimeo डाउनलोडर - केही क्लिकको साथ Vimeo भिडियोहरू बचत गर्नुहोस्
तपाईं पुरानो संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो संस्करण स्थापना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 4.2.2
नि: शुल्क Vimeo डाउनलोडर
❝Vimeo भिडियो केही क्लिकको साथ बचत गर्नुहोस्❞
➶ यस साइटले तपाईंलाई भिडियो URL प्रविष्ट गरेर कुनै पनि Vimeo भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
भिडियो युआरएल प्रतिलिपि गर्नुहोस् र माथिको बक्समा टाँस्नुहोस्, त्यसपछि Vimeo डाउनलोडरले भिडियो तुरून्त फेला पार्नेछ। डाउनलोड लिंकमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र Vimeo भिडियोहरू स्थानीय डिस्कमा बचत गर्नुहोस्।
साधारण Vimeo डाउनलोडर
यो विस्तारले तपाईंलाई Vimeo बाट डाउनलोड बटनहरू सिधा Vimeo प्लेयरमा इंजेक्शन लगाएर डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
तपाईंलाई Vimeo मा एक निजी भिडियो डाउनलोड गर्न र प्रत्यक्ष प्रसारण भिडियो रेकर्ड गर्न मद्दत गर्दछ। प्राय: वेबसाइटहरूलाई समर्थन गर्नुहोस्। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
यस Vimeo भिडियो डाउनलोड उपकरणको फाइदा
प्लेलिस्ट, च्यानल, मनपराउने, पछि हेर्नुहोस्, संग्रहबाट Vimeo भिडियोहरूको असीमित रकम डाउनलोड गर्नुहोस्।
☀ Vimeo चलचित्रहरू डाउनलोड गर्ने हाम्रो उपकरणले भिडियो पोर्टेबल बनाउन सक्दछ, तपाईं यसलाई इन्टरनेट पहुँचको आवश्यकता बिना बहुविध उपकरणहरूमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिएर।
☀ बफरिंग र लोडिंगको अनन्त घण्टा हटाउँछ! तपाईं भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र चलचित्र कुनै अवरोध बिना नै हेर्न सक्नुहुन्छ (तपाईंलाई यसलाई रोक्न र केही स्न्याक्स लिन अनुमति छ)।
☀ तपाइँ भिडियोहरू, चलचित्रहरू र टिभी कार्यक्रमहरू आफूले चाहे जति पटक पुन: हेर्न सक्नुहुन्छ।
☀ धेरै चोटि टिभी कार्यक्रमहरूबाट एपिसोडहरू सर्भरबाट मेटाइन्छ। यदि तपाईंले सर्वरबाट हटाउनु अघि एपिसोड डाउनलोड गर्नुभयो भने, यो तपाईंको संग्रहको अंश बन्छ।
Vimeo नि: शुल्क हेर्न, साझेदारी र HD भिडियोहरू अपलोड गर्नको लागि उत्तम साइट हो। तपाईं चीजहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईलाई रूचि कोटीहरू र च्यानलहरू ब्राउज गरेर। तपाईंले Vimeo Plus वा Pro खाता पाउनु भएपछि, तपाईं राम्रो सेवा र अधिक सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
Vimeo को लागी भिडियो डाउनलोडर
कुनै पञ्जीकरण बिना वा अनलाइन भिडियो डाउनलोडरबाट खाता खोल्नको लागि सरल र सजिलो चरणहरूको साथ भिडियोहरू छिटो डाउनलोड गर्नुहोस् र भिडियोलाई पछि हेर्नुहोस् वा अन्य उद्देश्यका लागि सुरक्षित गर्नुहोस्।
उच्च परिभाषा Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाइँ Vimeo अनलाइन भिडियो डाउनलोड पछि, भिडियो गुणवत्ता जाँच गर्न तिनीहरूलाई प्ले गर्नुहोस्। तपाईं सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू समान गुणहरूको साथ अनलाइन मौलिकहरूसँग स्वामित्व हुन्छ।
तपाइँको मनपर्ने भिडियोहरू पत्ता लगाउनुहोस्
खोज पट्टीमा कुञ्जीशब्दहरू टाइप गर्नुहोस्, सम्बन्धित Vimeo भिडियो देखा पर्नेछ। यी साधारण उपकरणहरूको साथ अफलाइन प्रयोगको लागि तपाईंको मनपर्ने Vimeo भिडियोहरू बचत गर्नुहोस्।
पूर्ण सुरक्षित र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र
तपाईंलाई शुल्क तिर्न, साइन अप वा अतिरिक्त प्रोग्राम स्थापना गर्न सोधिने छैन। कुनै पपअप, कुनै भाइरस छैन, साइट बिल्कुलै सफा छ।
Vimeo डाउनलोडर Google क्रोम, फायरफक्स, आईई, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसफ्ट एज, UC ब्राउजर र कुनै पनि वेब ब्राउजरमा राम्रोसँग काम गर्दछ। थप रूपमा, यो म्याक अपरेटिंग प्रणालीसँग अत्यधिक उपयुक्त छ।
कसरी Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्ने
Vimeo एक चर्चित विश्वव्यापी भिडियो होस्टिंग हो, रचनात्मक व्यक्तिको लागि डिजाइन गरिएको। व्यक्तिहरूले भिडियोहरू अपलोड गर्न, साझेदारी गर्न र हेर्न सक्छन्। अब, Vimeo बाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र Vimeo डाउनलोडरको साथ तपाईंको मनपर्ने HD र SD गुणवत्ता छनौट गर्न अझ सजिलो छ! तपाईले Vimeo भिडियोलाई mp4 वा mp3 फाइल ढाँचामा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। केवल तल यी चरणहरू पालना गर्नुहोस् र तपाईंको आफ्नै अफलाइन अफलाईन सिर्जना गर्नुहोस्।
यो वेबसाइट खोल्नुहोस्
Vimeo भिडियोको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं सबै उपलब्ध लिंकहरूको सूची देख्नुहुनेछ।
ढाँचा र गुणवत्ता छनौट गर्नुहोस् र भिडियोहरू अफलाइन आनन्द लिनुहोस्!
Million० लाख भन्दा बढी व्यक्ति Vimeo मा उच्च परिभाषा भिडियोहरू अपलोड गर्न छनौट गर्दछ ताकि विश्वसँग साझा गर्नुहोस्। यदि तपाईं Vimeo को एक ठूलो प्रशंसक हो, Vimeo भिडियो डाउनलोडर यसको छोटो फिल्म र फिल्म अनलाइन डाउनलोड गर्न तपाईंको सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ। यो अद्भुत डाउनलोडरले तपाईंलाई Vimeo बाट MP4 मा कुनै पनि भिडियो 720p, 1080p, 2K, 4K जस्तै उच्च गुणमा बचत गर्न सक्षम गर्दछ। सबै निर्णय पूर्ण तपाईंको प्राथमिकतामा आधारित छ। अवश्य पनि, उच्च गुणवत्ता राम्रो विकल्प हो। के अधिक छ, यस डाउनलोडरको सबै डाउनलोड सेवाहरू १००% नि: शुल्क छन्। एउटा प्रयास गरौं!
यहाँ तपाइँका प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी तपाइँको कम्प्युटरमा Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्ने वा बचत गर्ने?
+ Vimeo भिडियो डाउनलोडर के हो?
Vimeo भिडियो डाउनलोडर एक अनलाइन उपकरण हो जुन vimeo बाट सीधा तपाइँको कम्प्युटरमा भिडियोहरू डाउनलोड गर्दछ। Vimeo भिडियो डाउनलोडर प्रयोग गरेर तपाईं कुनै पनि vimeo भिडियो उच्च गुणवत्ता MP4 ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो डाउनलोडरले vimeo भिडियो लि links्कहरू निकाल्दछ र त्यसपछि तपाईं सीधा भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग गर्न को लागी सरल र बिल्कुल नि: शुल्क छ।
+ के Vimeo भिडियो डाउनलोडरले मोबाइलमा काम गर्दछ?
हाम्रो उपकरण वेब-आधारित उपकरण हो जुन केवल डेस्कटपहरूमा मात्र सीमित छैन। व्यक्तिले कुनै पनि ब्राउजरलाई उनीहरूले मनपर्ने कुरा प्रयोग गर्न सक्दछन्, कुनै पनि अपरेटिंग प्रणाली वा उपकरण पहुँच गर्नका लागि, साथै मोबाइल उपकरणहरू सहित।
+ मेरा भिडियोहरू डाउनलोड भए पछि कहाँ जान्छन्?
हाम्रो उपकरण मार्फत डाउनलोड गरिएका भिडियोहरू र चलचित्रहरू तपाईंको डिफल्ट डाउनलोड फोल्डरको रूपमा सेट गरेको जे पनि फोल्डरमा जान्छन्। तपाईले फिट ठान्नुहुने कुनै पनि ड्राइभमा फोल्डर सार्न सक्नुहुन्छ।
+ के उपकरणले मैले डाउनलोड गरेको फाइलको प्रतिलिपि बचत गर्दछ?
Vimeo डाउनलोडरले तपाइँका डाउनलोडहरूको प्रतिलिपि यसको सर्भरहरूमा राख्दैन।
+ मैले डाउनलोड गरेको सामग्री कहिलेसम्म राख्न सक्दछु?
एक पटक तपाईंले आफ्नो उपकरणमा एक चलचित्र वा एपिसोड डाउनलोड गरिसकेपछि, यो राख्न तपाईंको हुन्छ। तपाईं कुनै विज्ञापन अवरोध वा बफरिंग बिना तपाईं यो धेरै पटक हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुने संख्याको सीमा छैन।
+ त्यहाँ डाउनलोड फाईलमा एडवेयर हुनेछ?
निश्चय गर्नुहोस् डाउनलोड फाइलमा कुनै एडवेयर वा मालवेयर हुनेछैन। हाम्रो सर्वरहरू सुरक्षित छन्, र हामी हाम्रो प्रयोगकर्ताहरूलाई एक सुरक्षित लिंक तल दिन्छौं।
+ के म अरूसँग फिल्महरू साझेदारी गर्न सक्छु?
हो, त्यो हाम्रो Vimeo डाउनलोडरको बारेमा Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्न सब भन्दा राम्रो चीजहरू मध्ये एक हो, तपाईंले डाउनलोड गर्नुभएको भिडियोहरू अन्य उपकरणहरू र अन्य व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ।
+ एन्ड्रोइड वा आईफोन, आईप्याडमा कसरी Vimeo भिडियो लिंक प्राप्त गर्ने?
यदि ब्राउजर प्रयोग गरीरहेको छ भने, भिडियोमा ट्याप गर्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्, पप अप हुने मेनूमा प्रतिलिपि (वा दोहोरो प्रतिलिपि आइकन) चयन गर्नुहोस्। वा ट्याप गरेर ब्राउजर ठेगाना बारमा होल्ड गर्नुहोस्, मेनूमा ट्याप गर्नुहोस् सबै वा यसको आइकन चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि ट्याप गर्नुहोस् प्रतिलिपि वा यसको प्रतिमा।
यदि Vimeo अनुप्रयोग प्रयोग गरीरहेको छ भने, सेयर बटन खोजी गर्नुहोस्, यसलाई ट्याप गर्नुहोस्, सम्पर्कहरू, ईमेलहरू र अघिल्ला तरिकाहरूका साथ स्ट्यान्डर्ड सेयर मेनू देखाउँदछ, क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि विकल्प फेला पार्नुहोस् र त्यो ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्राउजरमा फिर्ता जानुहोस् र त्यहाँबाट कार्य गर्नुहोस् ...
+ तपाइँको मोबाइलमा Vimeo भिडियोहरू अनलाइन कसरी डाउनलोड गर्ने?
⓵ Vimeo खोल्नुहोस्
तपाईंको मोबाइल ब्राउजर सुरूवात गर्नुहोस् र Vimeo को आधिकारिक वेबसाइट पहुँच गर्नुहोस् वा तपाईंको स्मार्टफोनमा Vimeo अनुप्रयोग खोल्नुहोस्। तपाईंको छनौटको Vimeo भिडियो खोल्नुहोस् र URL ठेगाना ठीकसँग प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
⓶ Vimeo भिडियोको URL टाँस्नुहोस्
अब FBION वेबसाइटमा नेभिगेट गर्नुहोस् र त्यो ठेगानालाई हाम्रो Vimeo भिडियो डाउनलोडरमा टाँस्नुहोस्। अब, डाउनलोड सुरू गर्न डाउनलोड विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
⓷ भिडियोको गुणस्तर चयन गर्नुहोस्
तपाईंले भिडियोको क्वालिटी छनौट गर्नुभयो र डाउनलोड बटनमा ट्याप गर्नुभएपछि, तपाईंले डाउनलोड गरिरहनु भएको फाइलको आकारमा केही मिनेटमा भिडियो डाउनलोड हुन्छ।
⓸ तपाईंको Android / iOS मा पछि हेर्नुहोस्
तपाईंको मोबाइलको डाउनलोड सेक्सनबाट तपाईंको Vimeo भिडियो लिनुहोस् र इन्टरनेट जडानको आवश्यकता बिना डाउनलोड गरिएको Vimeo भिडियोको मजा लिनुहोस्।
कसरी आईफोनमा Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्ने?
म कसरी मेरो फोनमा Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्ने?
+ मेरो भिडियो किन अडियोको रूपमा देखाउँदछ? छवि कहाँ छ?
अगाडि बढ्नुहोस्, यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्! यो अझै भिडियो हो! तर तपाइँको इन्टर्नेट ब्राउजरले देख्न सक्दैन, त्यसकारण भिडियोलाई अडियोको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ ...
हेर्नुहोस्, समस्या यो छ कि Vimeo ले कहिलेकाँही HEVC ढाँचामा भिडियो प्रस्ताव गर्दछ, जुन प्राय: ब्राउजरहरू (क्रोम र फायरफक्स लगायत) प्ले गर्न सक्दैन। वास्तवमा भन्ने हो भने, सफारीले मात्र त्यस भिडियोलाई राम्रोसँग प्ले गर्न सक्छ।
जे भए पनि, त्यो ब्राउजरले पनि यो फाइल भिडियोको रूपमा प्ले गर्न सक्दैन, तपाईंको सामान्य भिडियो प्लेयर जस्तै VLC वा KMP कुनै समस्या हुँदैन। HEVC ढाँचा डेटा को आकार मा एक बिट बचाउँछ गुणवत्ता को हानी बिना, यो वर्तमान मा व्यापक रूप बाट प्रयोग AVC ढाँचा को एक संभव sucessor हो, तर यो भविष्यमा सबै हो।
त्यसकारण अहिलेको लागि मात्र विश्वास गर्नुहोस्, भिडियो फाईल डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंको उपकरणमा यसलाई चलाउन प्रयास गर्नुहोस्, यो राम्रोसँग काम गर्दछ, तपाईं देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं अझै मलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने, सफारी स्थापना गर्नुहोस्, उही vimeo लिंक चलाउनुहोस्, र सफारीले Chrome भिडियो र फायरफक्सले नसक्ने भिडियो प्ले गर्ने तरिका हेर्नुहोस्। तथ्यको कुराको रूपमा, यहाँ यो देखाइन्छ कि सफारी, आईई र एजले केवल HEVC भिडियो ढाँचा प्ले गर्न सक्छ।
+ के हुन्छ यदि भिडियो डाउनलोड छैन तर त्यसको सट्टा स्ट्रिम गर्न सुरू हुन्छ?
भिडियोमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो / लि Link्कको रूपमा सुरक्षित गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस्; मोबाइलका लागि ट्याप गर्नुहोस् र भिडियोमा समात्नुहोस्, मेनू पप अप हुँदा लि Link्क बचत गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस्।
यदि तपाईं त्यस्ता एक फेन्सी एप्पल उपकरणहरू जस्तै म्याकोस, वा आईफोन र आईपडहरूसँग आईओएसमा हुनुहुन्छ भने, हामीलाई दोष नदिनुहोस्, यो एप्पल हो जसले ब्राउजरहरूद्वारा कुनै पनि सामान्य mp3 र भिडियो डाउनलोड गर्न निषेध गर्दछ, आईट्यून्स केन्द्रमा हुन चाहन्छ। यो सबै को। र तपाईंलाई विशेष अनुप्रयोगहरू वा ब्राउजरहरू चाहिन्छ जसले एप्पलको ईच्छाको बिरूद्ध फाइल डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ।
+ म एउटा इम्बेडेड निजी Vimeo भिडियो कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु?
निजी Vimeo भिडियो RTMP प्रोटोकल मा आधारित छ, केवल सफारी मात्र यस प्रकारको भिडियो डाउनलोड गर्न समर्थन गर्दछ। यदि तपाईं Vimeo बाट अधिक भिडियो डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं एक डाउनलोड सहायक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
समान प्रश्नहरू: म Vimeo मा एक निजी भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
+ Vimeo भिडियो डाउनलोडरले कसरी काम गर्दछ?
यसले कुनै पनि प्रयोगकर्ता लग-इन बिना सार्वजनिक रूपमा हाम्रो मेशिनहरू मार्फत लिंक पहुँच गरेर कार्य गर्दछ, र यदि भिडियो जनतामा पहुँच योग्य छैन भने, यसलाई डाउनलोड गर्न सकिदैन। जस्तो कि यसले भिडियो उपलब्ध छ र डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर फेला पार्दछ, यसले डाउनलोड गर्न के के गुणहरू फेला पार्छ र प्रयोगकर्ताहरू डाउनलोड गर्न चाहान्छन् कुन रिजोलुसन चयन गर्न विकल्प देखाउँदछ।
+ कसरी अफलाईन हेर्न Vimeo भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने?
तपाईं Vimeo भिडियो अफलाइन हेर्न सक्नुहुन्छ?
यदि डाउनलोडका लागि भिडियो उपलब्ध छ भने, तपाईंले भिडियो वर्णन अन्तर्गत एक बटन देख्नुहुनेछ जुन डाउनलोड भन्छ। यो डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस् र भिडियो तपाइँको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्न सुरू हुनेछ र भिडियोहरू अफलाइनमा मज्जा लिनेछ।
+ Vimeo नि: शुल्क छ?
Vimeo ले चार सदस्यता विकल्प प्रदान गर्दछ: प्लस, प्रो, र व्यापार, प्रीमियम। ती प्रत्येकको भण्डारण र समर्थनको बिभिन्न स्तरहरू छन् जुन तपाईं तल चार्टमा देख्न सक्नुहुनेछ। Vimeo ले आधारभूत, निःशुल्क सदस्यता प्रदान गर्दछ, तर यसले तपाईलाई प्रति हप्ता 500MB अधिकतम भण्डारणमा सीमित गर्दछ।
+ म Vimeo बाट भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु?
तपाईंले डाउनलोड गर्न चाहानु भएको भिडियोको URL प्रतिलिपि गर्नुहोस्, र माथिको बारमा टाँस्नुहोस्। त्यस पट्टीको दाँया पट्टि डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्। यो केहि सेकेन्डको लागि लोड हुनेछ, त्यसपछि तपाईंसँग FLV (फ्ल्यास), MP4, वा वेबएम ढाँचामा भिडियो डाउनलोड गर्न विकल्प हुनेछ।
+ म कसरी Vimeo भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्दछु?
म नि: शुल्क कहाँ फिल्महरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
FBION वेबसाइट खोल्नुहोस्, Vimeo भिडियोको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं सबै उपलब्ध लिंकहरूको सूची देख्नुहुनेछ। ढाँचा र गुणवत्ता छनौट गर्नुहोस्, र भिडियो अफलाइन आनन्द लिनुहोस्!
+ के तपाईं मागमा Vimeo डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
जब तपाईं Vimeo भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न जुन खरीदको लागि उपलब्ध छ वा साइटको डिमांड सेक्शनमा भाँडामा लिईन्छ, तपाईं अवलोकन गर्न स्वतन्त्र भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईंसँग खाता छैन, जे होस्, यदि तपाईंसँग प्लस वा प्रो Vimeo खाता छ भने तपाईं स्रोत फाइलहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ जब उपलब्ध हुन्छन्।
+ Vimeo मा डाउनलोड सक्षम कसरी गर्ने?
प्लस, प्रो, व्यापार, र प्रीमियम सदस्यहरूसँग डाउनलोडको लागि उनीहरूको भिडियोहरू सक्षम गर्न विकल्प छ। यदि तपाईंसँग आधारभूत सदस्यता छ र तपाईंको खाता अपग्रेड गर्नुहोस्, डाउनलोड सक्षम गर्नका लागि विकल्प स्वत: सक्षम हुनेछ।
डाउनलोडका लागि भिडियोहरूको उपलब्धता भिडियोको सिर्जनाकर्ताको सदस्यता तहमा निर्भर गर्दछ। मूल सदस्यहरूले उनीहरूको भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्षम गर्न सक्दैनन्; जहाँसम्म, यदि भिडियो प्लस, प्रो, वा व्यापार सदस्यको हो भने, तिनीहरूसँग डाउनलोड विकल्पमा टगल गर्न विकल्प छ।
+ Vimeo ले कति खर्च गर्छ?
एक Vimeo प्लस सदस्यता, जो आधारभूत बाट एक बिट भण्डारण बम्प गर्दछ, प्रयोगकर्ताहरु cost7/ महिना खर्च हुनेछ, जो वास्तवमा तपाईको वालेटको लागि ठूलो हिट होइन। जहाँसम्म, एक प्रो सदस्यता एक वालप प्याक गर्दछ, धेरै अधिक भण्डारण र पूर्ण HD प्लेब्याकको साथ, T २० / महिनामा १ टीबी / वर्ष सम्म वा T /$ / महिनासम्म TTB सम्म।
+ Vimeo माग मा कति छ?
Vimeo PRO मा सामिल हुनुहोस् मात्र $ २० / महिना बिलको लागी बिक्री सुरू गर्न। यसलाई risk० दिन जोखिम-मुक्त प्रयास गर्नुहोस्। घर लेनदेन लागत पछि राजस्व को 90%। भाँडा, खरीद, वा सदस्यता छनौट गर्नुहोस्, र आफ्नै मूल्य सेट गर्नुहोस्।
+ म्याकको लागि Vimeo भिडियो डाउनलोडर कसरी छनौट गर्ने?
+ तपाइँ आफ्नो ग्यालरीमा Vimeo भिडियोहरू कसरी बचत गर्नुहुन्छ?
भिडियो डाउनलोड भएपछि, आईट्यून्स वा अन्य उपकरण जस्तै एन्ड्रोइड वा आईफोनमा तपाईंको कम्प्युटरमा डाउनलोड फोल्डरबाट भिडियो फाइल ड्र्याग गर्नुहोस्। अब Vimeo भिडियो तपाईंको मोबाइल ग्यालरीमा बचत हुनेछ।
Vimeo बाट भिडियो डाउनलोड गर्न उत्तम अनलाइन सेवा।
7 प्रयोगकर्ताहरूले मूल्या .्कन गरे
यस उपकरणको साथ, अनन्त Vimeo भिडियो संसाधनहरू हातमा छन्। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको Vimeo भिडियो URL ठेगानाको प्रतिलिपि गर्नु हो, यसलाई निर्दिष्ट स्थानमा राख्नुहोस् र डाउनलोड क्लिक गर्नुहोस्। एक क्षणमा, Vimeo डाउनलोडरले भिडियो स्वत: पत्ता लगाउँदछ र तपाईंको लागि डाउनलोड लिंक सिर्जना गर्दछ। तपाईं हेर्नुहोस्, यो Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्न को लागी एकदम सजिलो छ।
साइटले मलाई Vimeo अनलाइनबाट भिडियो डाउनलोड गर्न उत्तम समाधान दिन्छ। केवल भिडियो URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए, सबै ठीकठाक हुन्छ। याे अास्चर्यजनक छ।
आर्थिक सल्लाहकार, Fort Walton Beach
यो मैले प्रयोग गरेको सर्वश्रेष्ठ Vimeo डाउनलोडर हो। कुनै सीमितता बिना, म कम्प्युटरमा मेरा सबै मनपर्ने भिडियोहरू बचत गर्न सक्दछु। तपाईंको महान काम को लागी धन्यवाद!
कम्प्युटर समर्थन विशेषज्ञ, Old Saybrook
भिडियोहरू डाउनलोड गर्नु त्यति सजिलो भएको छैन किनकि कहिँ पनि पंजीकरण नगरी तपाईले Vimeo भिडियो हच्न सक्नुहुन्छ म छक्क परें किनकि मेरो मनपर्ने भिडियो मिनेटको केही अंशमा डाउनलोड हुन्छ।
डाटाबेस प्रशासक, Charlotte
भर्खर मैले एउटा ठूलो Vimeo भिडियो डाउनलोड गरें र केहि मिनेटमा यो डाउनलोड हुन्छ। म यसको अविश्वसनीय गतिबाट म साँच्चिकै छक्क परें। यो उत्तम Vimeo भिडियो डाउनलोडर हो।
सफ्टवेयर डेभलपर, Chattanooga
Vimeo भिडियो डाउनलोडर एक राम्रो उपकरण हो र यसले के वाचा गर्छ। Vimeo भिडियो डाउनलोड गर्न यो एक उत्तम उपकरण हो। म सबैलाई यो उपकरण सिफारिस गर्न चाहन्छु!
म Vimeo भिडियो डाउनलोडरबाट धेरै प्रभावित छु। वास्तवमा यो इन्टर्नेटमा उपलब्ध अन्य डाउनलोडरहरू भन्दा पूर्णतया नवीन र उत्तम छ।
नेटवर्क विशेषज्ञ, Greenland
यो एकदम उत्कृष्ट छ! डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन। केवल URL लाई प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् र तपाईं Vimeo भिडियोहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। र केहि अधिक लोकप्रिय भिडियो साइटहरू पनि राम्रोसँग समर्थित छ। मेरो लागि महान अनुभव र अब कुनै चिन्ता छैन!
एक महान निःशुल्क उत्पादन! यो ती मानिसका लागि एक आवाश्यक हुनुपर्दछ जसले अनलाइन भिडियो अफलाईनमा जान वा हेर्नको लागि मात्र हेर्न चाहन्छन्। प्रयोग गर्न सजिलो, सुरक्षित र भिडियो डाउनलोड गर्न वास्तवमै राम्रो काम!
उत्कृष्ट गुणमा MP4 मा Vimeo भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् 2021